ZTE Axon 7, falanqaynta qiimaha-dhamaadka ugu wanaagsan ee lacagta | Androidsis
ZTE Axon 7, tani waa taleefoonka casriga ah ee ugu sarreeya Android oo leh qiimaha ugu fiican ee lacagta
ZTE Waxay hoos uga dhacday hal talaabo tartamayaasheeda. Xarumaheeda dhamaadka-dhamaadka ah kuma iibin wax ku filan Yurub iyo, in kasta oo ay leeyihiin xalka weyn sida ZTE Axon EliteQalabkeeda caasiga ah ee dhibta badan iyo naqshadeynta soo jiidashada leh waxay ka dhigan tahay in iibku uusan ahayn sidii la filayay. Xalka? Cusub ZTE Axon 7, Terminal suuqa ku gaadha casharkii laga bartay.
In dadweynaha reer yurub aysan rabin terminaalka midabka dahabka ah? Waan xallinaynaa. Taasi naqshadda hore ee kala duwanaanta Axon Elite kaliya ma shaqeyso? Waxaan dib u habeyn ku sameynay terminaalka si aan u siino taleefan casri ah oo casri ah oo qiimo jaban ku fadhiya: 450 euro. Hadda waxaan kuu keenayaa a ZTE Axon 7 dib u eegista fiidiyowga, shaki la'aan taleefannada casriga ah ee ugu sarreeya dhammaadka Android oo leh qiimaha ugu fiican ee lacagta.
1 Naqshadeynta: biraha ayaa ku jira moodada ZTE Axon 7-na waxa ku lebisan sharaf weyn
2 Astaamaha farsamada ee dhererka heer sare
3 My Favour UI 4.0 wuxuu ku habboon yahay ZTE Axon 7 si aad u wanaagsan
4 Shaashadda AMOLED QHD, isku darka ugu fiican
5 Tayada codka ee cajiibka ah ee kugu martiqaadeysa inaad kula raaxeysato filimada asxaabtaada
6 Dareere faraha weyn
7 Ismaamul sax ah
8 Kamarad wanaagsan oo in ka badan la kulmi doonta waxyaabaha laga filayo adeegsade kasta
8.1 Tusaalooyinka sawirrada laga qaado ZTE Axon 7
9.1 ZTE Axon 7 Sawirka Sawirka
Naqshadeynta: biraha ayaa ku jira moodada ZTE Axon 7-na waxa ku lebisan sharaf weyn
Isbedelka ku aaddan adeegsiga qalabka caymiska Goobaha dhamaadka-sare waa xaqiiqo: taleefannada casriga ah ee aluminium ku dhammaada ayaa halkan jooga. Markii Samsung ay go'aansatay inay ka guurto polycarbonate ee calankeeda laba jiilal ka hor ayay cadaatay in tani ay tahay wadada loo maro. ZTE-na ma yaraan doono.
Wax ka barashada khaladaadkii hore, sida maqaarka foosha xun ee Axon Elite, soo saaraha Aasiya wuxuu go'aansaday inuu sharad ku sameeyo jir unibody ka kooban gebi ahaanba aluminium sii ZTE Axon 7 oo leh qaab soo jiidasho leh oo tayo leh.
Marka laga hadlayo shaqada cusub ee soo saaraha Shiinaha, waxaan helnaa taleefan laga sameeyay aluminium, ma ahan raad caag ah. Tan awgeed waxay go'aansadeen inay raacaan dariiqa ay dejisay HTC iyagoo siinaya qaar kooxo yaryar oo ku hareeraysan terminaalka waana meesha ay ku yaalliin anteenooyinka taleefanka, ka fogaanshaha jebinta bilicsanaanta casriga ah.
The ZTE Axon 7 isboorti a qallooca ka dhigaya taleefanka inuu ku fiicnaado gacanta. Qabashadu waa ka saxsan tahay inkasta oo shaadh caag ah oo difaaca ka mid ahi ku soo dhacayo sanduuqa, waxaan u isticmaalaayay ZTE Axon 7 aniga oo aan wax ilaalin ah lahayn isla markaana aanu sibibixnayn wakhti kasta.
Taleefoonkuna runti wuu u egyahay, sifiican ayaa loo qabtay, inkasta oo shaashaddiisu tahay 5.5-inji cajaa'ib leh, qalabka waxaa loo isticmaali karaa si raaxo leh iyadoo loo mahadcelinayo cabirkiisa aad u xakameysan: ZTE Axon 7 Wuxuu cabirkiisu yahay 151,7 x 75 x 7,9 milimitir.
Terminalku waa mid adag, waa 185 garaam oo miisaan ah Way xaqiijinayaan, inkasta oo aysan dhib ku haynin maalinba maalinta ka dambaysa. Dhinaca hore waxaan ka helnaa shaashad ka faa'iideysaneysa dhinacyada si wanaagsan, oo gaareyso saamiga 72.2% taas oo ay ugu wacan tahay meerarka ugu yar. Iyadoo la tixgelinayo in taleefankani uu ku jiro laba kuhadal wejigiisa, waa inaan aqoonsanno shaqada wanaagsan ee soo saaraha.
Xakamaynta mugga iyo badhanka / deminta taleefanka waxay ku yaalliin dhinaca midig ee ZTE Axon 7. Badhannadani waxay bixiyaan safar wanaagsan iyo iska caabin wanaagsan oo cadaadiska ah, iyaga oo siinaya dhammaystiradooda macdanta ah dareen weyn oo cimri dherer ah.
Dhinaca bidix waa meesha aan ka heli doonno booska si aan u gelino nano SIM kaarka iyo kaarka micro SD-ka, halka dhanka hoose ay jiraan oo kaliya nooca C dekedda lagu dalaco taleefanka. Horeba xagga sare waa meesha ay 3.5mm wax soo saar maqal ah
ZTE shaqo fiican ayey ka qabatay arrintan, abuurista taleefan qaab aad u qurux badan leh, dhammeystir tayo leh, xajin weyn iyo dareenka aan kula macaamileyno taleefanka runta ah ee qiimaha leh. Markaan arko faa iidooyinkeeda, way iska cadahay taas ZTE Axon 7 wuxuu sii wadaa inuu koobo heerka ugu sareeya qaybta.
Astaamaha farsamada ee dhererka heer sare
Tusaale Axon 7
Nidaamka hawlgalka Android 6.01 hoosta lakabka caadada ah
Screen AMOLED 5.5 inji oo wata tiknoolajiyada Corning Gorilla Glass 4 / 2.5D iyo Quad HD xal 1440 x 2560 pixels gaaraya 538 dpi
Gacaliye Qualcomm Snapdragon 820 (Laba geesood oo Kryo ah oo ku yaal 2.15 GHz iyo laba gees oo Kryo ah 1.6 GHz)
Kaamirada gadaal 20 MPX oo leh 1.8 furfurnaan / autofocus / xasilinta muuqaalka muuqaalka / ogaanshaha wajiga / panorama / HDR / laba-midab LED flash / Geolocation / duubista fiidiyowga ee tayada 4K
Kaameradda hore 8 MPX oo leh furfurnaan f / 2.2 / video ah oo 1080p ah
Tilmaamo kale shidma faraha / Dolby Atmos Teknolojiyadda / Nidaamka Lacagta Degdega ah / xawaare-dhaqameedka / dhammeynta macdanta
Batariga 3250 mAh aan laga saari karin
Cabbirada 151.7 x 75 x 7.9 mm
Peso Gram 185
Qiimaha 428 euro at Amazon
Markaad eegto astaamaheeda farsamo waa cadahay taas aaladda 'ZTE axon 7' ​​waa bahal. Iyadoo ay run tahay in Qualcomm uu dhawaan soo bandhigay Snapdragon 821, Waa in la sheegaa in awoodda ZTE Axon 7, lagu daray iyada 4 GB RAM xasuusta, Kuxeeji boosteejada cusub ee ZTE qaybta sare.
Telefoonku runtii si habsami leh ayuu u shaqeeyaa, Ma aanan dareemin nooc kasta oo dib u dhac ama joogsi ah waqti ku filan iyo, sidii la filayey, waxaan awooday inaan ku raaxaysto ciyaar kasta dhib la'aan, iyadoon loo eegin inta garaaf garaaf ah ay u baahan tahay.
My Favour UI 4.0 wuxuu ku habboon yahay ZTE Axon 7 si aad u wanaagsan
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu yar ee aan ugu jeclahay taleefannada ZTE wuxuu ahaa lakabka MI Favour caadiga ah. Muuqaal aad u xanaaq badan, khalkhal galin iyo isku xirnaan bloatware ah. Xaalada ZTE Axon 7 waa inaan qiraa taas, in kastoo Faa'iidadayda UI 4.0 wuxuu sii wadaa inuu u qaabeeyo sharraxaadda terminaalka qaab la yaab leh, wax yar oo la mid ah oo leh Android saafi ah ayaa laga heli karaa, runtu waxay tahay inay aad uga yar tahay dhibsashada noocyadii hore.
Sidoo kale nooca cusub ee Soosaaraha qaabkiisa loo habeeyay wuxuu bixiyaa heer sare oo qarsoodi ah iyo adeegsi, xannibaadda codsiyada ku jira asalka oo aad na ogeysiisid, faahfaahin aan aad u jeclahay.
Sidan oo kale waa inaan ku isku xir si barnaamijyada sida Spotify ama Instagram aysan si toos ah u xirmin, laakiin markii aan qaabeyno cabbiraadan waxaan arki doonaa sida nolosha batteriga u kordho si weyn nidaamkan.
Isagoo ka hadlaya muuqaalka, My Favour ma laha khaanad app, iyadoo la adeegsanayo nidaam kumbuyuutar ku shaqeeya oo lagu arko isweydaarsiyada kale ee soo saarayaasha Shiinaha ee doorbidaya inay doortaan nidaamka Apple OS. In kasta oo aanan jeclayn xalka ka imanaya Cupertino, haddana waa inaan dhahaa shaqsiyan waxaan jeclahay nidaamka desktop-ka wax badan oo ka mid ah khaanadda arjiga, in kasta oo aad jeceshahay midabada oo aad xasuusato inaad had iyo jeer rakibi karto qalab bilaash ah oo kuu oggolaanaya inaad habeyn karto shaqadan.
Ogeysiisyada shaashadda qufulka ayaa lagu qariyaa astaanta dawanka u eg, halkii daaha caadiga ah. Nidaam ka duwan kii hore laakiin aanan waqti dheer ku qaadan sidii aan ula qabsan lahaa. Gabagabaddaydu waxay tahay, in kasta oo isbeddelka qurxinta uu yahay mid la yaab leh, ma haysto cabashooyin aad u badan oo ku saabsan is-dhexgalkan caadada ah, aad buu u fiicnaaday marka loo eego noocyadii hore
Shaashadda AMOLED QHD, isku darka ugu fiican
ZTE ayaa sharad ku galay Xallinta QHD calankaaga cusub. Sidan oo kale ZTE Axon 7 ayaa ku dhejinaya a AMOLED guddi 5.5 inji oo aan lahayn wax intaa ka badan iyo wax aan ka yarayn 538 pixels halkii inji. Labadaba qaraarka, dhalaalka iyo muujinta midabada ayaa cadeyn ah marka aad daarto taleefanka.
Tani waa soo saaraha waxaad ku qasabtay buuxinta midabada mid xadidan si markaa aan loo qasbin, si sax ah loo helo markii la dooranayo heerkul midabkiisu kaamil yahay. Waan hagaajin karnaa laakiin waxaan kugula talinayaa inaad uga tagto sidii caadiga ahayd maadaama ay tahay halka midabbada ay ka dheelitiran yihiin.
Natiijo guud oo weyn oo leh a qaraarka oo aad uga sareeya inta loo baahan yahay taasina waxay nagu martiqaadaysaa inaan wax aqrinno saacado badan iyadoo aan indhaha laga daalin. Xusuusnow in heerka nuurku uu qumman yahay, awood u lahaanshaha inuu arko shaashadda dhib la'aan maalinta qoraxdu runta tahay iyo xaglaha daawashadiisu ka saxsan yihiin.
cunt 319 nits dhalaalka ugu sareeya Guddidani waxay ka hooseysaa xayndaabyada kale sida midka ku yaal Samsung Galaxy S7 Edge, laakiin waa in ka badan in ku filan in daawashada wax kasta oo ah noocyo badan oo warbaahin ah laga dhigo farxad run ah Inbadan oo mudnaantani waxay aadeysaa qeybta maqalka ee ZTE Axon 7, xoogga kale ee weyn ee qalabka.
Tayada codka ee cajiibka ah ee kugu martiqaadeysa inaad kula raaxeysato filimada asxaabtaada
Tani waa qayb ay inta badan soosaarayaashu nasiib darro dayacaan. Illaa iyo hadda waxay ahayd HTC cidda ku gacan sarraysa dhinacyadan afkooda hore laakiin ZTE waxay ku guuleysatay inay dhaafto soosaaraha Taiwan oo leh nidaamka afhayeenka Teknolojiyada Dolby Atmos.
Falanqaynta fiidiyowga ee madax u ah qodobkaan waxaan kaaga tegey tusaale si aad u maqasho waxa dhawaq wanaagsan kuwa ku hadla ZTE Axon 7 taasi, waxaan kuu sheegayaa, shaki la'aan inay yihiin kuwa ugu fiican suuqa. Waxay jilinayaan dhawaaqa hareeraha waxayna kuu oggolaanayaan inaad si buuxda ugu raaxeysato wax kasta oo ka kooban waxyaabo badan oo fiidiyoow ah ama ciyaar fiidiyoow ah, oo aad u bogaadinayso dhammaan niyada. Dabcan, mugga ha saarin ugu badnaan, hoos u dhig hal dhibic si aan dhawaqa u qalloocin.
Waxaan tusay tusaalooyin dhowr ah qoyska iyo asxaabta dhamaantoodna waa ay la dhaceen tayada codka. Adoo isku xiraya sameecadaha dhagaha ayaa tayada la hayaa laakiin haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato inta ugu badan ee suurtagalkeeda ah, xiro filim ama ciyaar oo la ciyaar qalabka ku hadla afkooda si aad u aragto fursadaha terminalkan. Shaqo heer sare ah oo ay ZTE ka qabatay arrintan.
Dareere faraha weyn
Waan jeclahay taas sawirka faraha Waxay ku taal dhabarka dambe markaa booska akhristaha biometrik-ka ee 'ZTE Axon 7' ​​wuxuu umuuqdaa mid ka saxsan. In kasta oo ku saabsan dhadhanka, midabada.
Mawqifku waa mid raaxo leh oo sahlan in la gaadho, qabashada terminalkuna waxay ku martiqaadaysaa farta farta inuu ku dul fadhiisto akhristaha. Haa, in kastoo dareemayaasha runti sifiican ayey u shaqeeyaan waa inaad hubisaa inaad fartaada si sax ah u saartey tan iyo mararka qaarkood waxay igu qaadatay wax ka badan hal jeer si aan shaashadda u furo. Marka la eego, xalka Huawei ayaa weli ah, kan ugu fiican, suuqa.
Waxaa jira shirkado sameeya oo kugu qasbaya inaad daarto shaashadda si aad awood ugu yeelatid inaad furto taleefanka, nidaam aan runtii aad uga xumaado. Nasiib wanaag iyada oo loo yaqaan 'ZTE Axon 7' ​​muhiim maahan in la kiciyo shaashadda si loo furoWaxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad fartaada ku dul fariisato akhristaha sawirka faraha isla markaana uu isla markiiba furi doono xarunta. Si fudud oo raaxo leh
Ismaamul sax ah
ZTE Axon 7 wuxuu kugu martiqaadayaa inaad ciyaarto ciyaaro oo aad fiidiyoow ka daawato shaashadeeda, inbadan oo leh tayada codka cajiibka ah. Laakiin sidee ayuu kaaga yahay 3.250 Mah batari? Runtu waxay tahay in celceliska dhexdiisa, iyada oo aan aad loo istaagin wax badan, in kasta oo aanu gaabin.
Sidan oo kale, isticmaalka caadiga ah, oo celcelis ahaan 1 saac ama saacad iyo badh ah Spotify, marinka internetka iyo adeegsiga shabakadaha bulshada iyo adeegyada farriimaha degdegga ah, taleefanka ayaa socday maalintii oo dhan. guriga u imanaya batari 20-25% ah. Wax yar oo dhaqsaha ayaan ku gaadhay 7 saac shaashadda.
Uma baahnid inaad ka walwasho taleefanka kaa tagaya inaad maalintii jiifto, in kasta oo ay u badan tahay inaad habeen walba lacag ka qaadanayso. Nasiib wanaag waxay leedahay nidaam lacag bixin oo fiican oo noo ogolaanaya in aan 100% ka qaadno batteriga in ka badan hal saac. Y qiyaastii 20 daqiiqo batteriga ayaa ku shubi doona inta u dhaxeysa 30 iyo 40% taas oo naga badbaadin karta in ka badan hal deg deg ah. Waxaan idhi, ismaamul wanaagsan laakiin aan lahayn faan weyn.
Kamarad wanaagsan oo in ka badan la kulmi doonta waxyaabaha laga filayo adeegsade kasta
ZTE Axon 7 wuxuu ku dhejiyaa a 20 megapixel Samsung shidma xagga dambe oo leh ugu badnaan f / 1.8, xasilinta muuqaalka muuqaalka iyo natiijooyin runti wanaagsan. Kaamirada 'ZTE Axon 7' ​​runti sifiican ayey u shaqeysaa, iyadoo si fiican u qabata deegaanno si fiican u shidan oo si wanaagsan ugu qabata xaaladaha iftiinka yar.
Runtu waxay tahay in kamaradda ugu weyn ee taleefanka ay bixiso a qaab ciyaareed aad u fiican iyo xawaare aad u sarreeya marka ay timaado qabashada. Intaa waxaa dheer, barnaamijku waa mid aad u dhameystiran, oo bixiya fursado badan oo kala duwan oo ah qaab miirayaal iyo shaqooyin ka farxin doona dadka jecel sawir qaadista.
Iyo sida dhamaadka sare ee wanaagsan, ZTE Axon 7 wuxuu leeyahay qaab kamarad gacmeed taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan wax ka beddelno cabbir kasta si aan u qaadno sawirro aad u fiican, innagoo awood u leh inaan kala duwno heerka buuqa, xawaaraha iyo xiritaanka, ISO iyo shaqooyinka kale ee noo oggolaanaya inaan ka faa'iideysanno inta badan fursadaha kamaraddeeda xoogga leh.
Intaa waxaa dheer interface waa mid aad u dareen leh taas oo nagu martiqaadeysa inaan si joogto ah ula ciyaarno kaamerada. Ahmiyad gaar ah natiijooyinka lagu gaadhay makro, labadaba jawi aad u yar ama mugdi yar leh, dadka jecel cilladda waxay ku qanci doonaan natiijada, gaar ahaan haddii ay ku ciyaaraan iswaafajinta buuggan u dhiganta.
La 8 megapixel kamarad hore Waxay ka badan tahay gudashada shaqadeeda adoo sameysanaya sawirro sawirro leh oo kuu oggolaanaya inaad hesho dhinacaaga ugufiican uguna mahadcelinta habka quruxda. Marka la soo koobo, kamarad weyn oo, iyada oo aan la gaadhin tayada muraayadaha indhaha ee kor u qaadaya LG G5 ama Galaxy S7 ama S7 Edge, waa inaan sheegaa inay si fiican iiga yaabisay.
Tusaalooyinka sawirrada laga qaado ZTE Axon 7
Aniga oo tixgelinayna taas gaariga 'ZTE Axon 7' ​​wuxuu ku kacayaa wax ka yar 450 euro Markaan arko awoodeeda, naqshadeynta iyo astaamaha guud ahaan, waa inaan dhahaa waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee la tixgelin karo. Waxaa i soo jiitay tayada shaashadeeda iyo dhawaqa cajiibka leh ee ku hadla.
Waxaan si xiiso leh u xasuustaa gacaliyahayga HTC One M7 iyo sida ay saaxiibaday ii xasadeen markii aan tusay dhawaqooda. Waxaan ka soo saaray khaanada, waan raray oo waxaan isbarbar dhigay dhawaaqa labada terminaal iyo, inkasta oo xubinta ugu horeysa ee kaladuwan ay sii wado inay aad uga sii fiicnaato qaar badan oo ka mid ah boosteejooyinka hadda, natiijada ay ku guuleysatay ZTE qaybtaan waa mid heer sare ah.
Iyo xaqiiqda ah in lakabkeeda caadadu uusan ahayn mid aad u fara badan ayaa ka dhigaya ZTE inay kor u kacdo heerarka tartamayaasheeda. Haddii ay raacdo waddadan, waxaan hubaa in soo-saaraha Shiinaha uu noqonayo bartilmaameedka qaybta.
ZTE Axon 7 Sawirka Sawirka
Dhamaadka-dhamaadka leh qiimaha ugu habboon
Shaashadu waxay bixisaa waxqabad aad u fiican
Tayada codka ee ku hadlaheeda waa mid cajiib ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » ZTE » ZTE Axon 7, tani waa taleefoonka casriga ah ee ugu sarreeya Android oo leh qiimaha ugu fiican ee lacagta
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay macquul tahay in la sameeyo qoraal meesha aan ku sharaxayo sida loo xidido Axon 7 maaddaama aan isku dayay siyaabo kala duwan oo aysan ii suurta gelin iyo, suurtagalnimada in lagu cusbooneysiiyo nougat maadaama cusbooneysiintu aysan weli soo bixin . Haddii aysan suurtagal ahayn, waan ku faraxsanahay haddii aad dhaafi karto xoogaa xiriir ah / xiriir ah si aad labadaba u awooddo.
PS: Ma haysataa Axon 7 xididaysan?
Ku soo jawaab Silvia Abascal
Kani waa Nokia 6, Nokia ugu horreeyay ee wata Android
Meizu M3 Xusuusin, falanqayn iyo ra'yi